Ndezvipi zvikonzero zvikuru zvinokonzera kudziya kwepasi | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | | Meteorology
Zana remakore rechiXNUMX iri kuva zana ramakore umo zvese zviri zviviri kuchinja kwemamiriro ekunze sezvo kudziya kwepasi kwave tyisidziro mbiri chaidzo yepasi rose. Kana iri kudziya kwepasi rose, el mismo inokonzerwa ne yakawedzera tembiricha yepakati yemakungwa nemuchadenga nekuda kwezvisikwa zvikonzero uye zvakanyanya semhedzisiro yeiyo chiito chevanhu.
ari masayendisiti uye nyanzvi Mumunda, ivo vakapedza makumi akati emakore vachidzidza chiitiko ichi uye kuyedza kufungidzira shanduko idzo kudziya uku inokonzera pasi rese mumakore mashoma uye kana kuchine nguva yekumira yakadaro zvinokanganisa mhedzisiro izvo zvinotyisidzira kupfupisa hupenyu hwepanyama hwePasi. Ipapo ini ndichataura zvakadzama uye kujekesa kwauri, ndeapi zvinokonzera kupisa kwepasi uye nemhedzisiro yayo inogona kuitika mukati nepakati nepakati.
1 Zvisikwa zvakasikwa zvekudziya kwepasi
1.1 Basa rezuva
1.2 Mvura yemvura
1.3 Mamiriro ekunze
2 Zvinokonzerwa nevanhu zvekudziya kwepasi
2.1 Wedzera mumhepo inokanganisa gasi
2.2 Kutemwa kwemasango
2.3 Fertilizer yakawandisa
2.4 Methane gasi
3 Ndeipi mhedzisiro yekudziya kwepasirese?
Zvisikwa zvakasikwa zvekudziya kwepasi
Zvinoenderana neruzhinji rwevadzidzi vekuchinja kwemamiriro ekunze, zvimwe zvezvikonzero zvekudziya kwepasirese kwepasi zvinogona kunge zvichikonzerwa zvikonzero zvakasikwa kana zvikonzero zvekugadzira zvinokonzerwa nemaitiro emunhu pachake. Kana iri zvikonzero zvakasikwa, vanga vachipa mukudziya kwepasirese kwepasi kwezviuru nezviuru zvemakore. Nekudaro, aya marudzi ezvikonzero haana kukosha zvakakwana kuti ape iyo shanduko yemamiriro ekunze kuti nyika yese iri kutambura nhasi uye kuti vari kukonzera kutyisidzira kwakakomba pasirese.
Imwe yei zvikonzero zvakasikwa zvekudziya kwepasi zvinonyanya kukosha uye izvo zvine kukanganisa kwakashata pahutano hwepasi pacharo, zvinokonzerwa nekuwedzera kukuru mukati chiitiko chezuva kukonzera kupisa-kwenguva pfupi kutenderera. Zuva redu riri kukura nekukura uye, nekudaro, rinogadzirawo mwaranzi yezuva panguva yekuita kwayo nyukireya fusion. Isu tinoziva kuti mwenje yezuva inokuvadza inotsauswa neiyo ozone layer uye iyo yePasi magnetic field. Nekudaro, ivo vanobatsira mukushanduka kwemamiriro ekunze, sezvo chikamu chemwaranzi iyi chichigara mumhepo yakachengetwa muchimiro chekupisa uye ichiwedzera tembiricha yepakati yepasi.
Imwe mhando yechikonzero chechisikigo chiri kukonzera kuti kudziya kwepasirese ndiko kuwedzera kwe chiutsi chemvura mudenga rinoita kuti tembiricha yepakati iwedzere kubva nguva nenguva uye ichipa kudziya pachako. Mvura yemvura igreenhouse gasi iyo inokwanisa kuchengetedza zvakasikwa kupisa. Izvo zvinopa kune yakasikwa girobhuusi mhedzisiro uye iri nekuda kweiyo mvura mhute iyo yatinogona kurarama mune aya anonakidza tembiricha yekuumbwa kwehupenyu.
Dambudziko nderekuti vanhu pavanoshandura chikamu ichi chemvura uye nekuwedzera mweya wemvura. Iwe unogona kuti ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvekudziya kwepasi kunoonekwa sekunge kwechisikigo uye kwechisikirwo panguva imwe chete. Iyo yakawedzera huwandu hwemhepo yemuchadenga yemhepo, iyo inowedzera kuchengetwa kwekupisa.
Chikonzero chechitatu chechisikigo chekudziya kwepasirese kuri nekuda kweinonzi mamiriro ekunze izvo zvinowanzo kuyambuka nyika nguva dzose. Aya macircuit anofanira kunge ari kumwaranzi yezuva dzenyeredzi mambo. Nenzira iyi, kana Zuva ndiko kunopa simba iyo inotyaira iyo Mamiriro ekunze epasi, zvine musoro kuti mwaranzi yezuva pachayo ine chinzvimbo chakakosha mukuchinja kwetembiricha kuri kuitika pasi rese.
Zvinokonzerwa nevanhu zvekudziya kwepasi
Kunyangwe hazvo zvikonzero zvakasikwa zvichitamba chinzvimbo chakanyanya mukudziya kwepasi, ndivo zvikonzero zvekudziya kwepasi izvo zviri kukonzera kuparara kwakanyanya paPasi. Zvakawanda zvinogadzirwa nevanhu mhedzisiro yekuwedzera inonzi magreenhouse gases zvinokonzerwa nezviito zvemunhu. Iyi greenhouse mhedzisiro inokonzerwa nekubuda kwe kabhoni diamoni uye ndicho chikonzero chakanyanya kukosha chekudziya kwepasi nhasi. Rudzi urwu rwekubuda rwave njodzi chaiyo uye kutyisidzira yehupenyu hwepasi uye ndosaka nyanzvi zhinji dzichitsvaga mhinduro dzekukurumidza kurova zvinokuvadza zvakadaro.
Wedzera mumhepo inokanganisa gasi
Aya kabhoni dhayokisaidhi mhedzisiro yekupisa zvisaririra. Uye ndeyekuti kwakawanda kwekutsva uku kunokonzerwa nekugadzirwa kwemagetsi uye ne gasi vanoshandisa mota mazuva ese mumigwagwa yenyika. Sezvo makore achifamba uye huwandu hwePasi hunowedzera, hwakawanda uye huzhinji huchapiswa. mafuta, zvinokanganisa nharaunda uye kudziya kwepasi, zvichisvika panguva iyo iyo tembiricha yakanyanya kukwirira zvichikonzera matambudziko akakomba muhuwandu hwenyika yose.
Isu tinofanirwa kunzwisisa masimba emuchadenga sechinhu chinoramba chichichinja nekuda kwekusungana kwemweya wakasiyana uripo mumhepo. Pamusoro pazvose, ne CO2, chiyero hachina kufanana nguva dzose, nekuti kune zvakawanda zvipenyu zvinoita photosynthesis uye zvinoshandisa gasi iri kurarama.
Zvimwe zvinokonzereswa nevanhu zvekudziya kwepasi ndizvo kutemwa kwemasango yemasango mazhinji epasi, zvichikonzera carbon dioxide kukwira mudenga rese. Miti inoshandura CO2 kuita okisijeni kuburikidza photosynthesis maitiro uye muridzi kutemwa kwemasango inoderedza huwandu hwemiti inowanikwa kushandura CO2 kuita oxygen. Mhedzisiro yeiyi yakakura CO2 kusangana mudenga, izvo zvinotungamira mukuwedzera kwekudziya kwepasirese uye nekudaro kukwira kwakanyanya kwekushisa.
Kutemwa kwemasango kunounza pamwe nekuderera kwezvisikwa zvipenyu nekuda kwekukamurwa nekuparadzwa kwenzvimbo dzinogara vanhu vazhinji. Mwero wekutemwa kwemasango hauregi uye zvinotarisirwa kuti muna 2050 inopfuura hafu yesango remvura reAmazon inenge yaparadzwa.
El kunyanya kushandisa mafetiraiza mune zvekurima ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvekuwedzera zvakanyanya mu avhareji tembiricha yepasi. Mafetireza aya ane huwandu hwepamusoro hwe nitrogen oxides, zvakanyanya kukuvadza kupfuura carbon dioxide pachayo. Sezvo huwandu hwevanhu hunowedzera uye huchiwedzera, pane a kuwedzera kudiwa kwechikafu, saka pane kuwedzera muminda yakasimwa uye nekudaro, yakakura kushandiswa kwefetiraiza mavari.
Kugadzirwa uye kugoverwa kwechikafu padanho repasi rose kunoda goho rinokurumidza iro rinoshandura mukushandisa zvisina tsarukano kwefetiraiza, mishonga yesora, mishonga yekuuraya zvipuka, fungicides uye zvese zvine chekuita nekusimudzira kukura nekusimudzira kwezvirimwa. Izvo zvinodikanwa kuti ufunge kwenguva refu uye kutanga kushandisa zvigadzirwa zvemuno izvo zvisingade mafetiraiza mazhinji uye zvine greenhouse gasi inoburitsa panguva yekufambisa ishoma.
Chikonzero chekupedzisira chekuongorora kudziya kwepasi uye icho chinofanirwa kutariswa ndeche gasi remetani. Rudzi urwu rwegesi rine akateedzana e greenhouse athari zvivakwa zvakanyanya kupfuura CO2 pachayo. Methane inogadzirwa zvakare kuburikidza nekuora kwe tsvina yemarara uye mune zvese zvine chekuita nenyaya yemupfudze. Chinhu chemuviri mukuora uye mukushayikwa kweokisijeni inogadzira gasi remethane. Iyi gasi iri kuwedzerawo mumisungo uye simba rekuchengetedza kupisa rakakura.
Sezvawaona nekusimbisa, ndizvo zvikonzero zvakawanda izvo zvinokonzera kudziya kwepasi kuwedzera uye kuisa pangozi nyika yepakati izwi. Kunyangwe hazvo zvikonzero zvekudziya kwepasirese vane zviitiko zvavo Mukudziya kwakadai, zvikonzero zvinoitwa nevanhu ndizvo kugadzirisa mune ipfupi nguva.
Mazuva mashoma apfuura zvaive zvichikwanisika kusimbisa kuti gore ra2015 raive inopisa yenhoroondo dzese pasi rese. Ichi chokwadi chinoshungurudza pamwe chete nekuwedzera kuri kuwanda zvakanyanyisa mamiriro ekunze madutu, chamupupuri kana chamupupuri chinofanira kubvisa kuziva kubva kune mazhinji e nzanga yepasi rose kutsvaga mhinduro nekukurumidza sezvazvinogona.
Tatarisana nemamiriro akaoma, hurumende dze masimba makuru epasi inofanirwa kutora matanho nekukurumidza uye kupedza shanduko yemamiriro ekunze uye kudziya kwepasi rose kuti pasi rese rinotambura zuva nezuva.
Ndeipi mhedzisiro yekudziya kwepasirese?
Migumisiro yekuwedzera kwetembiricha yepasi pano inokanganisa pasi rese kusvika padanho rakakura kana shoma. Semuyenzaniso:
MuSpain zviri kuonekwa kuti kupisa kwemhepo kuri kuwedzera kuwanda, kusingaperi uye kwakanyanya. Pasina kuenda kure kumashure munguva, musi waAugust 14, 2021, guta reCordovan reMontoro rakarova nhoroondo yaro yepamusoro, iine 47,2ºC, panguva yechiitiko chekupisa chakatora mazuva akati wandei.
Kukwira kwemwero wegungwa kunotimanikidza kushandura nzira munzvimbo dzakawanda. Semuenzaniso, mahombekombe anogona kurasikirwa, tisingataure kutyisidzira kwaachapa kune avo vese vanogara kumahombekombe.
Ecosystems ichachinja. Ichi muchinhu chinhu chirikuonekwa: zvirimwa izvo zvinopesana nemhepo uye kusanaya kuri kutsiva izvo zvishoma.
Mazaya echando ari kunyungudika, zvichibatsira mukukwira kwemwero wegungwa.
Mhuka dzinokurumidza kutsakatika. Kunyangwe pano isu taigona kutaura nezve poaching zvakare, kune mhuka dzakawanda, senge polar bere idzo dziri kuramba dzichinetsa kubata mhuka dzadzo, sezvo chando chinonyungudika nguva yayo isati yasvika.
Chikafu chinogona kudhura. Zvirimwa zvinoenderana nemamiriro ekunze kuti zvikure uye zvakare zviburitse michero yazvo, kuitira kuti kana zvinhu zvikashanduka, zvinonyanya kuomera kuwana miriwo, zviyo uye / kana miriwo.
Sezvauri kuona, kudziya kwepasirese idambudziko rakakomba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Zvinokonzera kupisa kwepasi
Rolando Escudero Vidal akadaro
Kumbira kweAtmospheric Balance Kudzokorodza uye Kudzora Project
Munyori Rolando Escudero Vidal
Ini ndinofunga nguva yasvika yekutaura nezve Pneumoponics. Pakarepo mazuva angu akaverengwa. Ini handidi kuti kana raingova guruva mumhepo, ndine hurombo kuti handina kuzvitaura, ndichiona vanhu vachitambura nemhedzisiro yekudziya kwepasi. Chokwadi, vamwe vachati ndinotaura benzi. Munhu wese ane kodzero yekutaura zvavanofunga. Asi, zvingave zvinonakidza kana vakandiratidza kuti ndinoti benzi. Kana zvirizvo, kamwe kamwe, ndinosvika pakuziva chimwe chinhu chinoita kuti nditaure zvakapusa. Ipapo ndaigona kana kukutendai. Asi, kuti kuratidzwa kune musoro, kuti kune mabheseni chaiwo.
Chii chinonzi mabayo? Pneumoponics inzira, sisitimu inosanganisira kudyara zvirimwa, ndiko kuti, miriwo, ine mweya kuburikidza nemudzi. Inogona zvakare kunzi kuvakwa. Iyo yakave yakapihwa patent mu INDECOPI, pakupera kwa2014.Ihurongwa hunoratidza pachena kuti miriwo inodyiswa chete nemudzi uye kuti mashizha anongoshanda kudzinga magasi anogadzirwa mukati memuti, semhedzisiro yemakemikari maitiro izvo zvinoitika mukati mavo. Uye rimwe remagasi iwayo, uye rakanyanya kuwanda, iokisijeni. Iyi nzira, yakashandiswa muzvikamu zvakakura, inogona kugadzirisa kudziya kwepasi zvakanyanya nyore. Uye, kwete chete kugadzirisa dambudziko, asi zvakare rinogona kubatsira murume kudzora mamiriro, kuvandudza kurima, nezvimwe. Sezvo miriwo inoshandisa mhando zhinji dzegesi sechikafu. Zvimwe ese marudzi egasi mumhepo.
Chii ichi chigadzirwa chakavakirwa? Ichi chigadzirwa chakavakirwa paRadicular Theory, yakadomwa nebhuku rakanzi Project of Reconversion and Control of the Atmospheric Equilibrium, rakanyorwa naRolando Escudero Vidal. Iyi dzidziso yakanangana nezvakawanda zvinhu uye zvinhu zvinoonekwa mune zvakasikwa. Iyi dzidziso inoti miriwo inodyiswa chete nemudzi. Kuti mashizha anoshanda chete kudzinga magasi anogadzirwa nemakemikari maitiro anoitika mukati.
Asi donzvo rekutanga reprojekti iyi kugadzirisa matambudziko emuchadenga anokanganisa vanhu. Neichi chikonzero, mumazuva ekutanga aKurume, zvakaziviswa kuPeruvia State, ichiendesa vhoriyamu yepfupiso yeLa Neumoponia kuImba yeHurumende, pachinzvimbo cheMutungamiriri weRepublic. Vhoriyamu muzita reGurukota remashumiro anotevera: Ministry of the Environment, Ministry of Agriculture, Ministry of Economy, Ministry of Foreign Affairs, nezvimwe. Zvakare kuCongress yeRepublic, pachinzvimbo cheMutungamiri weCongress, Mai Ana María Solórzano, avo, sekureva kwaLa Primera, vaive nemutsa zvakakwana kuti vataure mune izvi. Vhoriyamu yakaendeswawo kuYunivhesiti yeAgrarian.
Pindura Rolando Escudero Vidal
Uye ndeipi mhedzisiro yekudziya kwepasi? Zvakawanda uye zvakakomba kwazvo. Inofanirwa kutariswa kuti yakawanda kabhoni dhayokisaidhi iri kuwanda mumhepo. Iyi gasi ine kabhoni. Carbon inounganidza kupisa nekuitumira kunzvimbo yayo, uye mune mamiriro emuchadenga ipasi. Kana chinhu chapiswa chinowedzera uye pachinowedzera chinopera simba. Uye mune ino kesi, iyo pasi kutenderera kuri kupisa. Naizvozvo iri kuwedzera. Uye kana iri kuwedzera, iri kupera simba.
Mhedzisiro yeichi chiitiko kutsemuka kuri kuoneka munzvimbo zhinji. Imwe yenzvimbo idzodzo mudiwa wangu Callejón de Conchucos. Phenomenon iyo inobata guta rePiscobamba, Socosbamba nezvimwe. Uye mhinduro chete, zvinosuwisa, ndeyekusiya nzvimbo. Hakuna mumwe. Zvakanaka, sezvingabvira, nzvimbo idzi dzine gore rimwe chete rasara kuti dzigare.
Francisco Garcia akadaro
Ini ndinobvuma, ichi chingave chiri chinhanho chinotevera chehydroponics uye aeroponics, izvo parizvino zviri kubudirira kwazvo senzira dzekugadzira dzekurima. Ini pachangu, ndinofunga kuti vanhu vakatoona kukuvara kunofanirwa "kugadziriswa" nekutsvaga dzimwe nzira, pasina kukanganwa kuti zvirimwa ndiko kutanga kwesimba rekugadzira mune biosphere.
ndatenda ndokuona munguva pfupi
Pindura kuna francisco Garcia
Kune zvikonzero zvakawanda zvekudziya kwepasi, matambudziko mazhinji nekuda kwekudziya kwepasirese, vanhu vazhinji vanogona kufa, matanda anonyungudika, panogona kunge paine mafashama mazhinji, nekuda kweizvozvo vanhu havafunge zvinogona kuitika.
Pindura José María
Enrique jr akadaro
Vanhu havasi kuti ivo havafunge asi kuti ivo havapi kukosha kwakanyanya kune izvo zvinogona kuitika kana paine nhamo Mwari asingatenderi uye ivo vari kungozoziva izvo zvisiri izvo kupa kukosha kupasi
Pindura kuna enrique jr
Pindura kune pink
Nitrogen uye oksijeni mumhepo inosangana nenzvimbo dzinopisa kwazvo (ZVEZVIMBO MUMWE MUMWE MOTOMBO WENYANYA), zvinoshandurwa kuita nitrous oxide, iyo inopindirana mu stratosphere ine ozone, pasi pechiito che radiation ye wavelength isingasviki 0,31 micrometer, zvichikonzera kupera kweiyo ozone rukoko.
Nei mamirioni erwendo rwegore negore asina kumbotaurwa? Mr mari is a gentleman ane simba!.
vanhu vakapusa zvekuti chero nguva pakaitika mafashama nekuda kwekudziya kwepasirese ndaigona kuti ndine hurombo
Chii chiri chechokwadi ndechekuti idambudziko kuti nekukurumidza kana kuti gare gare rinoguma richikanganisa (zvimwe) isu tese. Kunze kwekunge matanho anoshanda chaizvo atorwa kuti uzvidzivirire, chokwadika.
Agustin Chavez akadaro
Nyaya yekudziya kwepasirese, vazhinji vedu tinonetsekana sezvo paine zvinhu zvinokanganisa mamiriro ekunze, zvisinei hazvo isu hapana chatinoita, zvakakosha kuti nzanga, hurumende neasina-hurumende masangano, vezvemabhizimusi, masangano edzidzo uye nemunhu wese anoda kumira kana kudzikamisa matambudziko aya atiri kutarisana nawo, ngatitangei mishandirapamwe inosimudzira kuziva nezve kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kwenzvimbo nekudaro tidzivise hosha zhinji, zvirwere uye kuvepo kweshanduko yekabhoni dhayokisaidhi.
Pindura Agustín Chávez
Ini ndinokurudzira iyo zvinyorwa COWSPIRACY kuvhura hurukuro inonakidza pamusoro penyaya iyi, nekuti sekureva kwenyora, honzeri huru yekudziya kwepasirese ibasa rezvipfuyo zvakanangana, izvo zvine chekuita pasina kana chidiki pane nzira yedu yekudya. Uye chikonzero chiri nyore: kudya nyama kunoda kushandiswa kukuru kwezviwanikwa uye kana iwe ukatarisa pane chero menyu yekudyira, iyo nyama yekugovera inenge yakazara. Ichi chinhu chatisinganyatso kuziva nezvacho, uye kuti tipe mupiro, vazhinji VEVANHU VANOFANIRA kuita shanduko mukushandisa kwavo chinhu nechinhu chakaomesesa sekudya, imwe yemhando dzakanakisa dzemafaro. Kuongorora nyaya yacho, kunze kwekuratidzira kwakakomba kwazvo kwechinyorwa chandinotaura, zvine musoro pasina kufunga zvakawanda nezvazvo. Icho chinyoro uye chisina kubatika, nekuti sezviri pachena misoro yeindasitiri yezvipfuyo ine simba rakakura mune zvematongerwo enyika padanho repasi rose.Iyo yakaoma, isina kugadzikana zvinyorwa, uye tinoda kuti ive isina hwaro, asi muchidimbu, anofumura kuti nyaya yekudziya kwepasirese ine chekuita nekudiwa kweshanduko kune umwe neumwe wevagari vepasirese, nekuchinja kwemaonero kwete mukanwa chete asi nekusimudzira kwekunzwira tsitsi kune zvese zvatakatenderedza. . Ndinovimba unoifarira uye tinotarisira kuti tinogona kuona izvi nenguva. Hatigone kuenderera tichiseka veganism nekuda kwekuti vamwe vane hukasha uye vanotsamwisa, isu tinofanirwa kufunga nezvezvisikwa senzira yekurarama yekuremekedza kune nyika yakatipa zvese. Yenguva yekudzorera chimwe chinhu. Kwaziso.
Inofanirwawo kutariswa kuti chimwe chezvisakiso zvikuru zvekutemwa kwemasango ndechekuti, kuwedzera kune zvipfuyo, minda yemichero yekutsigira zviuru zvevanhu. Uye iwe unofanirwa zvakare kufunga nezve mafotereza.
Vanhu ndivo vekutanga kupomera mhosva yekusvibisa nharaunda, nekuda kweizvozvo kunopisa, mhepo irikuparadzwa uye ndisu tinoiparadza patinoratidza masango, tinotema miti, utsi hwakawanda hunotikanganisa, nezvimwe. .
Maitiro ese ezvisikwa anosiya zvasara, izvo zvaunofanirwa kuita kupa nzira kwayo kune izvo zvakasara.
Kutsvaga vatadzi hakugadzirise dambudziko, asi, kushandisa nzira yakakodzera.
Jorge Ventura akadaro
Vanoti isu hatizive izvo zvatinazvo kudzamara tazviona zvarasika, saka zvichaitika kana kusvibiswa kukapfuura pasi, hunyanzvi hwakawanda huchave hunoshandiswa kana tikazvipira kune yedu nyika isingadzoreke kupfuura mari yese nehunyanzvi MWARI akatisiira nyika yakagwinya semuviri wedu kana tikasachengeta muviri wedu uye isu pachedu tinokonzeresa zvirwere zvisingadzoreke nenzira yedu yekudya isu tinofanirwa kuve nehuchenjeri hwakawanda pamusoro pekuti tinozvibata sei muhupenyu isu tatoziva kuti hatina tinofanira kurasa marara isu hatifanirwe kusvibisa nzizi dzedu nemakungwa uye kunyangwe zvakadaro tinozviitira nekuda mari asi munhu wese anoziva maitiro avo uye isu tinongofanirwa kuita chikamu chedu chekuita chakarurama
Pindura kuna jorge ventura
Chero dambudziko rinogona kugadziriswa.
kugadzirisa, asi kwete kudzosera kumashure
kuita naRl Atisal akadaro
Pasi riri kushandurwa nekushaya hanya kukuru uye kushaya ruzivo mukucherechedza nguva, kushomeka kwekusagadzikana kwekudzivirira kuwora kwenzvimbo yedenga, iwe unofanirwa kutarisa kumusoro kuti uone maitiro pazasi, ese akanyatsoteerera, tarisa kumusoro uye kumusoro uye kumusoro kuona zvakawanda uye nekuwedzera uye pasi pazasi
Pindura kuti uite kubva kuna rl Atisal
Iyo CO2 inoora sei
Zviripachena kuti CO2 inoora kana marasha achidziya. Zviratidzo zvakajeka zveichi chokwadi zviitiko zviviri zvinoitika mune zvakasikwa: panosvika mwaka wechirimo kunaya kwemvura kudonha. Kana zhizha rasvika rikaenda, mvura inowedzera, ichidonha mvura inorema. Nei izvi? Izvo zvinoitika ndezvekuti muchirimo mwaranzi yezuva ichiri panzvimbo iyo painotadza kupisa zvakanyanya. Kune rimwe divi, muzhizha aya mwaranzi anosvika akananga pamhepo uye anopisa zvakanyanya. Uhu humbowo hwekuti CO2 inoora pakupisa, kusunungura oxygen. Ipapo oxygen inobatana nehydrogen, yakawanda mumhepo, ichiumba mvura, H2O. Uye ipapo mvura.
Huaycoloro inzvimbo iri mudunhu reHuarochirí. Kana zita rayo rikabva kumazita maviri eKech-huas: huay-ghó uye loj-ro, inzvimbo inogona kuva nenjodzi. Iyo huay-ghó rudzi diki kwazvo, rwakaonda rwenyoka, hwakareba masendimita makumi matatu uye rwakawandisa kana rwusingasviki mamilimita mana. Kufamba kwayo kuri kuderera pasi. Inogara pasi pevhu. Inogona kukamurwa nepakati uye mativi ese ari maviri achiri mupenyu. Imwe neimwe inoenda nenzira yayo uye inosvika pasi pevhu pavanogara.
Huayco inouya kubva kuzita renyoka iyi, nekudaro, zvivakwa zvayo zvakafanana neizvo zveyenyoka diki Nekuti vagari vekare venzvimbo idzi vakatumidza nzvimbo zvichienderana nezvavakaona. Uye mahuaycos anofamba nenzira isingadzike senge nyoka diki, uye kana akapatsanuka anoramba achitenderera.
Uye chii chinoti "parrot" ibviro yezita rekuti "loj-ro" rinova iro zita reKech-hua rechikafu chakaita semuto, asi chakakora, musanganiswa wezvinhu zvakawanda: miriwo, mbatatisi, bhinzi, nyama, nezvimwewo. Iyo huayco kana yasvika panzvimbo iyo painogona kumiswa inounganidza ichiumba chimwe chinhu chakafanana nechikafu chambotaurwa. Kubva ipapo zita rekuti Huaycoloro rakazvarwa.
john jhair akadaro
Kana iyo ultra violet mwaranzi ikapfuura tinopisa kusvika tafa
Pindura kuna juan jhair
Gino Gallo akadaro
Zvinosuruvarisa sei mushure memakore mashoma isu tichafa takatsva, kana isu tisingaite chinhu isu chinoita kuti vanhu vazive kuti varege kushandisa mafekitori.Ita nhamburiko yekubatsira nharaunda.Ndokumbirawo shamwari, ngatiedzei kumisa izvi zvisati zvanyanyisa.Dzorerazve miti yemiti uye tinogona kuwedzera hupenyu kumunhu Ndapota ndibatsirei 🙁
Pindura Gino Gallo
unofanirwa kudzivirira izvi
Zvinokonzera kupisa kwepasi zvinogona kuve zvakawanda. Asi pane nzira inogona kugadzirisa dambudziko; iyo Project yeKudzokazve uye Kudzora kweAtmospheric Zvemukati kana Pneumoponics.
ruzivo rwakanaka kwazvo
donais sebastian herrera medina akadaro
Hupenyu hwepasi pano hwakanaka chose kana tikakanganisa iro ramangwana revana vavo risati rasvika, ndeipi nyika yavachasiya mukana, haigone kuve hei, tese isu to con vatir kupokana nechisimba, hei zvese, isu tiri munhu, kwete mhuka, ngatichengetedzei nyika, hei kunyange mhuka dzinozvichengeta
Pindura kuna donais sebastian herrera medina
Pindura kuna MATTHEW-YT
Lucia Paredes akadaro
vanhu vanorega kunyepa uye vanoteerera sainzi.
Pindura kuna Lucía Paredes
Moisés Ugido Cedeño akadaro
Chikonzero chikuru chekudziya kwepasi imombe, magasi emethane anobva kumombe, ne stiercol yavo uye kubatika, zvinosvibisa kupfuura CO2 yese inogadzirwa nevanhu vese, kutemwa kukuru kwemasango kunodiwa kumafuro anoda nzvimbo yakawanda nezviwanikwa, kugadzira zvakadaro zvishoma ...
Iwe unoda here kubatsira kudzivirira kudziya kwepasirese? Usadya nyama.
Ini ndinokurudzirawo kutarisa iyo documentary ng'ombeparacy iyo iripo inotsanangurwa chaizvo chaizvo
Pindura kuna Moisés Ugido Cedeño
Alberto compagnucci akadaro
Zvakawanda pane kupa chirevo, ini ndoda kugadzira mubvunzo. Kunze kwezvikonzero zvakanyorwa sekutanga kwekudziya kwepasi, zvinoita here kuti isu tiri kupinda mukutenderera kwemamiriro ekunze kwatisina nhoroondo dzezvakaitika? Ndiri kutaura nezvekufamba kwepasi, uko kune kutenderera kunotora makore angangoita makumi maviri nemashanu uyezve, nekuda kwekureba kwayo, isu hatina chero chirevo uye zvishoma nemamiriro ekunze. Zvinoenderana nezvandakanzwa, isu tave makore angangoita gumi nemaviri muzera rechando uye zvakangoitikawo, zvinowirirana nehurefu hwehafu kutenderera kwechiratidziro. Zvingave here kuti isu tiri munzira yakatarwa kune iyo nguva yatisina mareferenzi ayo? Saizvozvowo, zvinowirirana kufunga kuti, uchiziva kuti kutenderera kwePasi kwakatenderedza zuva ndiko kupoteredzwa, mharidzo yacho inounza shanduko muchinhambwe pakati pechirevo cheiyo ellipse uye nekudaro kuchinjwa kwayo uye kuti kunoratidzwa, kunyangwe kwete zvishoma, mukuchinja kwemamiriro ekunze?
Pindura Alberto Compagnucci
diego saavedra gonzalez akadaro
Zvakanaka, izvi zvakandibatsira zvakanyanya, maita basa, asi pane ongororo inoti kupisa kwepasi ingano uye kuti izvi zvakatoitika katatu, saka zvandiri kutsvaga ndezvekuti ichi ichokwadi here?
Pindura kufago saavedra gonzalez
Ndingaite sei kuti ndishandise ruzivo urwu mubasa rangu kana chirevo kana pasina munyori kana imwe yunivhesiti inotsigira ruzivo rwakagovaniswa, izvi zvinonditsamwisa pamapeji ewebhu, aripi mareferenzi kana nzvimbo dzevanhu vakatsvaga kana basa remumunda, zvachose kubirira.
Ini ndinofunga isu tinofanirwa kununura nyika nekumisa zvese izvi
Alex Gonzales-Herrera akadaro
Hazvina kunaka ndingadai ndakazviisa mune rondedzero nekuti yakawanda chete nekuda kwezvikonzero zvakashata zvakanyanya kusambopinda ino saiti haina kundishandira zvachose
Pindura kuna Alex Gonzales Herrera
Camila Bear akadaro
Zvinotaridza kwandiri kuti zvakaenda pasina kutaura mutsamba kuti chimwe chezvikuru kukanganisa indasitiri yezvipfuyo inokonzeresa huwandu hukuru hwemagasi ekupisa, pamusoro pekupisa kwemafuta. Mhepo dzinoburitswa nezvipfuyo zvipfuyo ndidzo dzinokonzeresa magreenhouse gases uye kana tikazvibatanidza nekutema masango kurima chikafu chekukodza mombe, zvinokonzerwa nekudziya kwepasi zvinowanda.
Pindura kuna Camila Osa